OromiaTimes: TUFFII MOOTUMMAAN WAYYAANEE FI JALA DEEMTUUN ISHEE OPDON BARATTOOTAA FI HAWAASA OROMOOF QABDU!!
TUFFII MOOTUMMAAN WAYYAANEE FI JALA DEEMTUUN ISHEE OPDON BARATTOOTAA FI HAWAASA OROMOOF QABDU!!
Nama hubatuuf haala cunqursaa mootummaa WAYYAANEE hubachuun salphaa dha! Kan hin hubatneef ammo rabbi sammuu itti haa deebisu malee dalagaa jala deemtotni mootummaaa wayyaanee OPDO’n yuuniversiitii Haramaayaa keessatti dalagaa jirtu waan addaati. Kunis kitaaba “MATERIALS FOR THE STUDY OF PENAL LAW OF ETHIOPIA” jedhu kan maqaa saba oromoo fuula 267 irraa “GAALLAA” jedhu barattoota seeraa kan waggaa lammaffaaf raabsuuni. Waanti nama ajaa’ibu ammoo barattoota oromoo ta’aniif iddoo jecha kanaa dhangala’aa dibuun yoommuu irraa balleessan barattoota saba biraaf ammoo otoo irraa hin balleessiin kennuu isaaniiti.Kitaaba kanas kuusaa kitaabaatii baasuuf itti aanaan prezedaantii yuuniversiitii kanaa bara darbe waadaa galu illee ammas akka rabsamu taasisuudhaan jibbinsa inni barattootaa fi saba oromoo irraa qabu salphaatti saaxilameera.
Haaluma wal fakkaatuun barsiisaa muummee afaan oromoo kan ta’an barsiisaa Katamaa Gammachuu kan jedhamu ijoollee sabboontotaaf qabxii dabaltee miseensota OPDO irraa ammo qabxii murteetta jechuun yakkanii hojii irraa arii’aniiru. Haala kana guutummaan guutuutti sabboontotni oromoo yuuniversiitii kanaa mormuun marii cimaa adeemsisuun maandheen wal ijaaraa jiru.maandheelee kana keessaas maandheen GAADDISA ODAA BULLUQ JALAA waadaa ishee haaromsachuudhaan barattoota barattoota sabboontata armaan gadiin marii gaggeessunun ibsa ejjennoo baasatteetti.
1. Abbaa biyyaa Moosisaa
2. Abdii Borii
3. Yoomiyyuu Dhugaasaa
4. Finiinsaa Qabsoo
5. Balaa diinaa Horroo
6. Urjii Bilisummaa fi
7. Murmur Bosonaa ti
1. Waadaa walii galle hanga bilisummaa fi bilisummaa booda itti fufna.
2. Gootota wareegaman ni yaadatna. Gumaa isaaniis ni baasna.
3. Arrabsoo,hidhaa,hacuuccaa fi cunqursaa uummata oromoo irra ga’u ni mormina.
4. Oromiyaan biyya of dandeessee fi alaabaa mataa ishee qabdu waan taateef alagaan bulchuuf mirga hin qabu.
5. ABOn kallacha qabsoo uummata oromooti.
6. Ayyaanota oromoo fi dhaaba keenya ilaallatu ni ayyaaneffatna. Kan wayyaanee fi lukeewwan ishee garuu ni fashaleessitna.
7. Dhaaba keenya ABO wajjiin hanga dhumaatti waadaa fi amanamummaadhaan hanga dhumaatti wajjiin taanaa fi k.k.f baafachuudhaan ture.
Kanaaf dhaamssi keenya dalagaan akkasii fi arrabsoon akkanaa karaa mootummaa Habashaa dhufee fi jala deemtuu ishee OPDO dhaan caalaa dhufe haamilee keenya waan tuquuf sabnni Oromoo marti qotee bulaa, baratoota Yuuniversiitii fi koleejjii, hawaasnni Oromoo marti kan biyya keessa fi biyya alaa sagalee keenya akka dhageessinuun dhaamssa keenya!!
Yuniverziitii Haroomaayaa irraa
Gepostet von OromiaTimes an 11:04 am